Laabashada Laptops-ka ... iyo Beddelka kale | Martech Zone
Sabti, Febraayo 24, 2007 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Aad u qosol badan oo aan la wadaagin:
OpenID Lagu rakibay iyo Diyaargarow!
Febraayo 24, 2007 saacadu markay tahay 10: 56 AM
(Way fiicantahay in la arko inaannaan ahayn meesha keliya ee barafku ku daboolan yahay)
Febraayo 24, 2007 saacadu markay tahay 10: 59 AM
Lagu heshiiyay! Waxaan fiirinayay khariidadaha cimilada xalay waxayna lahaayeen baraf badan dhanka Galbeed ee halkan. Aaway dhammaan kuleylka adduunka? Waxaan helayaa gaari ka weyn!